Category Archives: Article Salvation
လောကတွင် အချို့သော အရာများသည် ကာလကြာရှည်လာသည် နှင့် အမျှ ကောင်းလေ ဖြစ်သည်။ သို့သော် Advertisements
ကြိုတင် ဟောကိန်းထုတ်ခြင်း၊ နိမိတ်ပြုခြင်း နှင့်ပတ်သက်ပြီး အလွန် စိတ် ၀င်စားစရာ ကောင်း သောအချက် တစ်ချက်ရှိသည်။
ဧ၀ံဂေလိ တရား (၂) မျိုး ရှိပါသည်။ ၁။ လူ၏ အလိုသို့ လိုက်၍ ဟောပြောသော ဧ၀ံဂေလိ နှင့် ၂။ ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်နှင့် အညီ ဟောသော ဧ၀ံဂေလိ ဟူ၍ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်သည်ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်မရှိပဲလူအဖြစ်လောကသို့ရောက်ရှိလာခဲ့ရပါသည်။ ထို့အတူလူအဖြစ်လာရာတွင် လည်း မိဘညီအစ်ကိုမောင်နှမနှင့်မြို့ရွာဒေသ အစရှိသည်တို့ကိုလည်းရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်မရှိပါ။ သို့သော်
PDF Edith Burns သည် Texas ပြည်နယ် San Antonio မြို့တွင် နေထိုင်သည့် ခရစ်ယာန် ယုံကြည်သူ အမျိုးသမီး ကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။
စာရှုသူအဆွေသင်သည် ဤလောကထဲမှ တစ်နေ့ ပျောက်ကွယ်သွားရမည်ကို သတိ ပြုမိပါ သလား။ “သေတစ်နေ့၊ မွေး တစ်နေ့” ဟု ထင်ကောင်း ထင်ပေလိမ့်မည်။
“မသိသူ ကျော်သွား၊ သိသူ ဖေါ်စား´´ ဟူသောစကားရပ်ကို မိတ်ဆွေကြားဖူးပေလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့ မသိနားမလည်သော အရာများစွာ ရှိသော်လည်း ဤဓမ္မစာစုပါအကြောင်းအရာများကို မသိရှိပါမူ မိတ်ဆွေသည် အကြီးမားတကာ့ အကြီးမားဆုံးသော ဆုံးရှုံးခြင်းနှင့် ရင်ဆိုင်ဘို့ရန် ရှိပေသည်။
ယုံကြည်သူခရစ်ယာန်တိုင်း ကျေးဇူးတော် (grace) ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုံးကို နေ့တိုင်းနီးပါး ကြားလေ့၊ သုံးလေ့ ရှိကြပါတယ်။ ကျေးဇူးတော် သက်သက်ကြောင့် နေကောင်း ပါတယ်၊ ကျေးဇူးတော် သက်သက်ကြောင့် အောင်မြင်ခြင်း အခွင့် ရပါတယ်…. စသဖြင့်ပေါ့…. နောက်ပိုင်း
သခင်ယေရှုသည် ပျောက်သောသူတို့ကိုရှာ၍ ကယ်တင်အံ့သောငှာ ဤလောကသို့ ကြွလာတော်မူသည်။ မိမိကယ်တင်ခြင်း အတွက် ရေငတ်သောသူ၊ ၀န်လေး ပင်ပန်းသော သူများသည် ကိုယ်တော် ထံတော်ပါး သို့လာပြီးလျှင်
ကယ်တင်ခြင်း လက်မခံသော သူတိုင်း ငရဲသွား ရမည်ဖြစ်ပြီး ယင်းငရဲ ထဲတွင်လူတန်း စားလေးမျိုး တွေ့ရပါသည်။
လူထု တရားဟောပွဲ တစ်ခု၌ အမျိုးသမီးငယ် တစ်ဦး သည် နောက်ဆုံး သောည တိုင်အောင်၊ ကယ်တင်ခြင်း တရားကိုလက်မခံနိုင်ခဲ့ပေ။
ခရစ်ယာန်သာသနာပြုလုပ်ငန်း မှထုတ်ဝေသော သမ္မာကျမ်းမှအခြေခံ သြ၀ါဒများစာအုပ်မှ ကောက်နှုတ်တင်ပြထားပါသည်။ http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf Open publication – Free publishing – More zomi
ယေရှုက “ခမည်း တော် သည်သမ္မာတရား ကိုပြသော ဝိညာဉ်တော် တည်းဟူသော တပါးသော ဥပဇ္ဈာယ် ဆရာကိုသင်တို့နှင့် အတူ အစဉ်မပြတ်တည်နေစေခြင်းငှါ သင်တို့အား ပေးတော်မူမည်။
တစ်ခါက အလွန်ချမ်းအေးတဲ့ အရှေ့ဥရောပ နိုင်ငံ တစ်ခုရဲ့ြေ မအောက် အကျဉ်းစခန်း တခုမှာ ယုံကြည်သူ ခရစ်ယာန်တစ်ဦး အထိမ်းသိမ်း ခံနေရပါတယ်။